HomeWararka CiyaarahaChelsea oo Dib u fureysa Wadahadalada Ousmane Dembele?
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay wadahadalo dib ula furto garabka Barcelona Ousmane Dembele, kaasoo qandaraaskiisa Camp Nou uu dhacayo bisha soo socota.
Madaxweynaha Barca Joan Laporta ayaa daaha ka qaaday in heshiis cusub uu Dembele u soo bandhigay “waqti dheer ka hor”, balse 25-sano jirkaan ayaan weli go’aansan mustaqbalkiisa, maadaama uu ku jiro meelo kale.
Paris Saint-Germain ayaa la rumeysan yahay inay ka mid tahay kooxaha isha ku haya xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska, kaasoo ka tagay dalkiisa 2016, kuna biiray kooxda Bundesliga ka dhisan ee Borussia Dortmund.
Sida laga soo xigtay 90min , ka dib markii Todd Boehly uu dhawaan la wareegay Roman Abramovich , Chelsea ayaa haatan awood u yeelan doonta inay la xaajooto Dembele, kaasoo lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Stamford Bridge bishii Janaayo.
Kooxda Thomas Tuchel waa inay dulqaad muujiyaan oo ay rajeynayaan in Dembele ay sugaan heshiiska ay kula wareegayaan dawladda UK, halka PSG ay horeba dalab uga gudbisay xiddiga garabka ka ciyaara, Bayern Munich ayaa sidoo kale la sheegay inay wadahadalo kula jirto Dembele. .
Tan iyo markii uu yimid Catalonia 2017, Dembele waxa uu dhaliyay 32 gool, waxaana uu caawiyay 34 gool 149 kulan oo uu u saftay Barca.